Kurova kwemwoyo: Svikira Vanopfuura Makumi zana nemakumi mashanu Vanoshushikana Vakadzi Mireniyumu Vatengi
NeChishanu, Kurume 2, 2018 Svondo, Kurume 4, 2018 Douglas Karr
Mabhiza nhasi arikushandisa madhora makumi matatu nemasere emadhora munzira dzekudyidzana kuti vaite uye vawane vatengi vezviuru zvemireniyamu vachishandisa mishandirapamwe yemhando yeFluencer ine mazita emukurumbira. Zvisinei; kubatikana uye kutendeuka zvakaderera nekuti vakadzi vezviuru zvemazana vanovimba uye vanoita zvakanyanya nemazano eshamwari chete kana vachisarudza pakati pechigadzirwa kana sevhisi neimwe. Kurova kwepamoyo ipuratifomu yevakadzi vane chiuru chemakore kusimudzira mabrands mukati meakaundi nhoroondo uye nharaunda. Heartbeat nguva pfupi yadarika yakaburitsa yayo Discover Feed, ichipa isina musono nzira
Dzimwe nguva ndinogomera pandinonzwa izwi rekuti mireniyamu muhurukuro dzekutengesa. Pahofisi yedu, ini ndakakomberedzwa nemireniyamu saka fungidziro dzehunhu hwebasa nekodzero zvinondiita kuti ndinyanye. Wese munhu ini ndinoziva kuti zera riri kuvhiringidza matako uye tariro kune yavo ramangwana. Ini ndinoda zviuru zvemamirioni - asi ini handifunge kuti vakasaswa guruva remashiripiti rinovaita vakasiyana zvakanyanya kubva kune chero mumwe munhu. Iwo mamireniyoni andinoshanda nawo haatyi ... zvakanyanya kufanana
Iko Kukanganisa kweDhijitari Kushambadzira Maitiro paChikwereti Unions uye ZveMari Masangano
Chipiri, February 21, 2017 Mugovera, Kukadzi 13, 2021 Douglas Karr
Anoshanda naye Mark Schaefer nguva pfupi yadarika akaburitsa posvo, gumi Epic Shifts ari Kunyorazve Mitemo Yekutengesa, izvo zvinofanirwa kuverengerwa. Akabvunza vashambadziri muindastiri yese kuti kushambadzira kwaifamba zvakanyanya sei Imwe nzvimbo yandinoona yakawanda yechiitiko mukati kugona kwehukama hukama netarisiro kana mutengi. Ini ndakati: Uku kuyerera kwedata kunogona kureva "kufa kwemass media uye kusimuka kweakanangwa, akasarudzika ekushambadzira zviitiko kuburikidza neABM uye